Wareysi Dhalinyaro u duceeyay dadki dhawaan lagu laayay xeebta Liido | Gaaloos.com
Home » alshabaab » Wareysi Dhalinyaro u duceeyay dadki dhawaan lagu laayay xeebta Liido
Wareysi Dhalinyaro u duceeyay dadki dhawaan lagu laayay xeebta Liido
Dhalinyaro ku nool caasimadda Muqdisho ayaa galabti Jimcaha ee maanta isugu tagay xeebta Liido gaar ahaan maqaayadii dhawaan dadka badan lagu laayay si ay ugu baroor diiqaan uguna duceeyaan.
Dhalinyaradan ayaa kakala yimid xaafadda Muqdisho waxayna isku balansadeen xeebta Liido sida uu HANOOLAATO u sheegay Sakariye Cabdi Xaliim si ay dareenkooda ula wadaagaan ehelada iyo dadki ay ka dhinteen marxuumiintaasi oo ay ku jireen dhalinyaro aqoonyahano ah iyo qeybaha kale bulshada Soomaaliyeed.
Dhalinyaradan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa muddo dhowr saacadood ah fadhiyay bacaadka xeebta iyaga oo akhrinaya qur’aan una duceynaya dadki halkaasi ku nafwaayay.
Waxaa dhalinyaradaasi kamid ahaa Sakariye Cabdi Xalim oo qadka telephone ugu waramay HANOOLAATO waxana uu sheegay in aysan wali hilmaamin dadkii qaaliga ahaa ee halkaasi ku dhintay.
Sakariye waxaa uu xusay in dhacdadaasi ay ahayd mid dareen guud oo ka duwan kuwi hore ku abuurtay dadweynaha reer Muqdisho maadaama goobtaasi lagu dilay dad rayid ah oo ay ku jireen dhalinyaro aqoon yahan ah.
Waxaa wali dadweynaha kunool magaalada Muqdisho ay la xanuunsanayaan dhacdadaasi oo tiiraanyo xoog leh ku reebtay dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed inti dhiig muslim ku jiro, gaar ahaan dadweynaha reer Muqdisho oo siweyn uga gubtay tacadigaasi.
Waa marki ugu horeeysay ee dhalinyaro kala kala yimid xaafadda Muqdisho ay baraha bulshada inta ay iska balan sadaan isugu yimaado duco iyo quraan akhris ay ku xusuusanayaan walaalahooda lagu xasuuqay Muqdisho dhawaan. waxaa talaabadani sidoo kale ay ififaalo u tahay dareenka soo jeedo ee dhaliyarada Soomaaliyeed oo ka duwan sidi hore oo inta leyska laayo ay iska ilaawi jireen. Warbaahinta HANOOLAATO oo dheerigelineysa talaabada dhalinyarada ayaa barnaamijkan idiinkaga diyaarisay ducada dhalinyarada reer Muqdisho
Ayaanle Xuseen Cabdi oo London jooga ayuu u waramay Sakariye Cabdi Xaliim oo Muqdisho jooga waxaana wareysigiisa u dhacay sidan.
Title: Wareysi Dhalinyaro u duceeyay dadki dhawaan lagu laayay xeebta Liido